Wararkii Ugu dambeeyay ee dagaalka ka holcaya Gobolka Tigray dalka Itoobiya.
Tuesday November 17, 2020 - 09:11:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaallo iyo duqeymo culus ayaa wali kasii socda qeybo badan oo kamid ah deegaannada dhaca waqooyiga wadanka itoobiya.
Wararka ka imaanaya gobolka Tigray ayaa sheegaya in ciidamada dowladda xabashida ay qabsadeen deegaan istiraatiiji ah oo ay horay umaamulayeen maleeshiyaadka Ururka TPLF ee dagaalka ba'an kula jira xukuumadda uu Abiy Axmed madaxda ka yahay.
Dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in ciidamadeeda cirka ay duqeeyeen bartilmaameedyo militari oo kuyaala agagaarka Maqalla ee caasimada gobolka Tigreega halkaas oo ay ciidanku kula jiraan iska hor imaad hubaysan jabhadda tigreega.
Ridwan Xuseen wasiiru dowlaha arimaha dibada ahna afhayeenka gudiga cusub ee gurmadka ee dhawaan la sameeyay ee ku saabsan dagaalada socda ayaa sheegay in ay geysteen duqeymo ay ku beegsadeen bartilmaameedyo xadidan sida uu hadalka u dhigay.
Afhayeenka ciidamada xabashida ayaa isna xaqiijiyay in diyaaradahoodu ay duullaan ku qaadeen goobo milatari oo kuyaala duleedka magaalada Maqalla ee xarunta Gobolka Tigreey oo aysan kujirin magaalada.
Wakaalada wararka ee Reuters oo soo xiganaysa 4 ilo diblumaasiyadeed iyo militari ah oo sheegaya in diyaarado dagaal ay duqeymo cardaadiqaha uga dhigeen magaalada maqaalla iyo hareeraheeda.
duqeymaha ayaa dhaliyay in korontadu ay magaalada ka go'do islamarkaana ay dad farabadan markale barakacaan.
Saraakiisha TPLF ayaa ku eedeeyeen dowladda Abiy Axmed in diyaarado casri ah oo shisheeye ay u adeegsanayso duqeynta islamarkaana ay burburin ku hayso goobaha muhiimka u ah adeegyada bulshada sida buundooyinka, suuqyada ganacsiga iyo biya xireennada korontada laga dhaliyo.
TPLF waxay sheegaysaa in diyaarado Drone ah oo dowladda Imaaraatka carabta ay leedahay qeyb ka yihiin duqeymaha, telefeshinka ku hadla afka amxaarada ayaa soo wariyay in ciidanka melleteriga Itoobiya ay qabsadeen degmo 120KM ujirta magaalada caaismadda ah ee maqalla.
dhinaca kale waxaa sii xoogeysanaya cadaadiska ay Itoobiya wajahayso ee dhanka diblumaasiyadda, waxaa socda dadaallo lagu doonayo in dhinacyada is haya lagu wadahadalsiiyo.
wafdi uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa tegaya magaalada Addis Ababa si midowga Afrika uu Abiy axmed uga dhaadhiciyo in uu wadahdaal lafuro jabhadda Tigreega.
Waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa ka cabsi qaba in dagaalka ka socda gobolka Tigray uu isku rogo dagaal sokeeye kadibna ay burburtay dowladda xabashida itoobiya.
Wararkii ugu dambeeeyay: Jabhadda Tigreega oo dib ula wareegtay magaalooyin muhiim ah.